Petro I 4 NA-TWI - Abrabɔ foforo - Esiane sɛ Kristo huu - Bible Gateway
Petro I 3Petro I 5
Petro I 4 Nkwa Asem (NA-TWI)
4 Esiane sɛ Kristo huu amane ne honam mu nti, munso saa adwene koro no ara mu mfa nhyɛ mo ho den. Efisɛ, obiara a ohu amane wɔ honam mu no ne bɔne nni biribiara yɛ. 2 Efi mprempren rekɔ no, mo nna a aka wɔ asase so ha no, ɛsɛ sɛ Onyankopɔn na odi mo abrabɔ so a ɛnyɛ onipa akɔnnɔ so. 3 Moasɛe mmere bebree de ayɛ nea ɛsɛ sɛ manmufo na wɔyɛ. Motenaa ase wɔ ahohwi, akɔnnɔ, asabow, agobɔne, adidimee ne abosonsom mu.